बाहुबली २: द कन्क्लुजन - विकिपिडिया
बाहुबली २: द कन्क्लुजन २०१७ भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्म हो जुन एस एस राजामौली द्वारा निर्देशित छ र उनको बुबा के.वी. विजयेन्द्र प्रसादले लेखेका थिए। अर्का मिडिया वर्क्सको ब्यानर अन्तर्गत शोबु यार्लागड्दा र प्रसाद देवीनेनीले यसलाई निर्माण गरेका थिए। २८ अप्रिल २०१७ मा रिलीज भएको फिल्ममा प्रभास, राणा डग्गुबती, अनुष्का शेट्टी र तमन्नाह रम्या कृष्ण, सत्यराज, नासार र सुब्बाराजु प्रमुख भूमिकामा देखिन्छन्। बाहुबली फ्रान्चाइजीमा दोस्रो सिनेमाई भाग, यो बाहुबलीको अनुवर्ती हो: शुरुआत, दुबै सीक्वल र प्रिक्वलको रूपमा सेवा गर्दछ। यो फिल्म मध्ययुगीन भारतमा सेट गरिएको छ र अमरेन्द्र बाहुबली र भल्लालदेव बीचको भाई प्रतिस्पर्धाको अनुसरण गर्दछ; पछिल्लाले यो बिरूद्धको षडयन्त्र र उसलाई कट्टप्पाले मार्छ। वर्षौंपछि, अमरेन्द्रको छोरो आफ्नो मृत्युको बदला लिन फर्कन्छ। निष्कर्ष तेलुगु र तमिलमा एकै साथ बनाईयो र पछि हिन्दी, मलयालम, ओडिया, जापानी, रूसी र चिनियाँ भाषामा डब गरियो।
२८ अप्रिल २०१७ (2017-04-28)
₹२०० करोड (युएस$२८ मिलियन)
₹८८७ करोड (युएस$१२० मिलियन)
२.५ अरब को अनुमानित बजेटमा निर्मित, उत्पादन १७ डिसेम्बर २०१५ मा रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबादमा शुरू गरिएको थियो। छायांकन के.के. सेन्थिल कुमार द्वारा गरिएको थियो, र कोटागिरि वेंकटेश्वर रावद्वारा सम्पादन गरिएको थियो। उत्पादन डिजाइन साबू सिरिल द्वारा गरिएको थियो, जबकि कार्य अनुक्रमहरू पीटर हेन द्वारा कोरियोग्राफ गरिएको थियो। दृश्य प्रभावहरू आर. सी. कमलाकान्ननले, अदेल अदि र पेटे ड्रापर को सहयोगमा डिजाइन गरेका थिए। ध्वनि ट्र्याक र पृष्ठभूमि संगीत एम। एम। केरावानी द्वारा रचेको थियो। परम्परागत २ डी र आइमेक्स ढाँचामा रिलीज, द कन्क्लुजन पहिलो तेलुगु फिल्म थियो जसले केके उच्च परिभाषा ढाँचामा पनि रिलीज गर्‍यो।
विश्वव्यापी ₹१७१९६.५६ करोड कमाउन, द कन्क्लूजनले पीके (२०१४) लाई पछाडि पार गर्‍यो र यो रिलीजको छौ दिनमै विश्वव्यापी रूपमा ₹८ अर्ब डलर संकलन गर्‍यो। १० अरब डलर भन्दा बढी कमाउने यो पहिलो भारतीय फिल्म बन्यो, केवल १० दिनमा उसले यस्तो कमायो। भारत भित्र, यसले धेरै फिल्म रेकर्डहरू सेट गर्‍यो, हिन्दीमा सब भन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म, साथै यसको मूल तेलगु र तमिल भाषाहरूमा पनि। यो भारतमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म हो, विश्वव्यापि दोस्रो दोस्रो सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्म र २०१७ को ३९औं सर्वाधिक कमाई गर्ने फिल्मको रूपमा खडा छ। फिल्मले बक्स अफिस रनको दौडान अनुमानित १० करोड टिकटहरू (सबै भाषाहरू संयुक्त) बेचेको छ, शोले (१९७५) पछि भारतमा कुनै पनि फिल्मको लागि उच्च अनुमानित फुटफॉल।
समालोचक आलोचकहरु बाट सकारात्मक समीक्षा को लागी जारी गरीयो। यो पनि फिल्म उद्योग को कलाकारहरु द्वारा एक जस्तै प्रशंसा गरिएको थियो। निष्कर्षले सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मको लागि अमेरिकी शनि शनिबार, र अष्ट्रेलियाई टेलस्ट्र्रा पीपुल्स च्वाइस पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यसले तीन राष्ट्रिय फिल्म पुरस्कारहरू जित्यो: उत्तम लोकप्रिय फिल्म प्रदान गर्ने स्वस्थ मनोरंजन, सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव र उत्तम स्टन्ट कोरियोग्राफर। यस निष्कर्षको प्रदर्शन ब्रिटिश फिल्म इन्स्टिच्यूटमा गरिएको थियो, र ३९ औं मस्को अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको उद्घाटन फिचर फिल्म थियो। यो भारतको ४८ औं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको "भारतीय दृश्य" खण्डमा प्रदर्शन गरिएको छ।
सुदीप - असलम खान
प्रभाकर - कलकेय राजा
कट्टप्पाले वर्णन गरे कि उनले कसरी अमरेन्द्र बाहुबलीको हत्या गरे।
कालाकेयलाई परास्त गरेपछि अमरेन्द्र बाहुबलीलाई महिष्मति र भल्लालदेव को यसको सेनापति-प्रमुखको रूपमा घोषित गरियो। राजमाता शिवगामीले अमरेन्द्रलाई कट्टप्पाको साथ राज्य र यसको छेउछाउको भ्रमण गर्न आदेश दिन्छ। यो यात्राको क्रममा अमरेन्द्रले कुष्ठलाकी राजकुमारी देवसेना / थेभसेनाई, महिष्मतीको छिमेकी राज्यको आक्रमण देखे। उनीसँगको प्रेममा झर्दै उनी झगडा भएपछि उनीसँग सम्पर्क राख्छन्, सिम्प्टन र टुहुरो भएर उभिन्छन् र कट्टप्पाले उसको काकाको भूमिका खेल्दछन्, र उनलाई शाही दरबारमा कामका लागि स्वीकार्य छ।
भल्लालदेवले अमरेन्द्रको अभिनयको सन्देश पाउँछिन् र देवसेनाको चित्र हेरेपछि उनी खुशी भए। उसले शिवगमीलाई विवाहमा देवसेनाको हात मागे। देवसेनाप्रतिको अमरेन्द्रको भावनाको बारेमा अनजान रहेको राजमाता भल्लालदेवलाई आश्वासन दिन्छिन् र कुन्टालाको लागि एक दूत पठाउँछिन् जसले विवाहको प्रस्ताव संरक्षणको रुपमा प्रस्तुत गर्छिन्। अपमानित देवसेनाले प्रस्तावलाई नराम्रो जवाफले अस्वीकार गर्दछ। उनको प्रतिक्रिया सुनेर रिसाएपछि शिवगामीले अमरेन्द्रलाई आदेश पठाए कि देवसेनालाई बन्धक बनाएर महिष्मतीमा लानु होस्।
यसैबीच, कुन्टालालाई पिन्डारिसले आक्रमण गरेको छ, डकैत - जस्तो सेना। अमरेन्द्र, कट्टप्पाको सहयोगमा, देवसेनाको मामा भतिजी, कुमार वर्मा, आक्रमणलाई शून्य गर्न र कुन्तलालाई बचाउन सक्षम छन्। सोधपुछ गरेपछि, अमरेन्द्रले आफ्नो वास्तविक चिनारी प्रकट गर्दछ। उनलाई महिष्मतीबाट चराको पोष्ट प्राप्त हुन्छ र उसलाई देवसेनालाई बन्दी बनाउने आदेश दिन्छ। उनी देवसेनालाई आश्वासन दिन्छन् कि उनले उनको सम्मानको रक्षा गर्नेछन् र उनलाई उनीसँग भावी दुलहीको रूपमा महिष्मतीमा आउन मनाए।
महिष्मतीमा पुगेपछि यो गलतफहमी प्रकाशमा पर्‍यो र जब अल्टिमेटम अमरेन्द्रलाई सुम्पिइयो कि उसले कि त सिंहासन वा देवसेना छनौट गर्नै पर्छ, उसले पछि छान्छ। भल्लालदेवलाई राजाको मुकुट लगाईयो र अमरेंद्रलाई नयाँ कमाण्डर-इन-चीफ बनाइयो। यसले आमिरेन्द्रको लोकप्रियतामा असर पार्दैन। देवसेनाको बच्चा स्नान गर्दा भल्लालदेवले अमरेन्द्रलाई आफ्नो कामको उपहारमा गिफ्ट गरे र सेतुपतिलाई प्रस्ताव गरे। देवसेना शिवगामीको अक्रियाको विरुद्ध बोल्छन् र भल्लालदेवलाई निन्दा गर्दछन्। थप झडपका कारण (देवसेना र सेतुपतिबीचको झगडा), अमरेंद्र र देवसेनालाई राजदरबारबाट हटाइयो र उनीहरु बीच खुशी खुशीले बाँचे।
बिजलदेवले कुमार वर्मालाई विश्वास दिलाउँछ कि भल्लालदेव अमरेन्द्रको जीवन पछि हो र उनले आफ्नो जीजाको रक्षा गर्न राजालाई मार्नु पर्छ। कुमार वर्मा रातको चुपचापमा दरबारमा छिर्दछन्, केवल भल्लालदेवले पत्ता लगाएका थिए र मारिए पनि, जनताले निरन्तर आदर गरिरहेकोले शिवरामीलाई अमरेन्द्रको हत्या गर्न लगाउन उनीहरूको षडयन्त्र प्रकट गरेनन्। भवल्लदेवको ज्यान जोखिममा छ भन्नेमा सिवागामी विश्वस्त थिए तर खुला शत्रुताले गृहयुद्ध निम्त्याउँछ, कट्टप्पाले अमरेन्द्रको हत्या गर्ने आदेश दिए। कट्टप्पा रानीको सेवा गर्ने उनको वचनले बाँधे, अमरेन्द्रलाई उनी समस्यामा परेको कुरा बताएर लोभ्याउँछन् र पछाडि प्रहार गर्दछन् र मार्छन्।
अमरेन्द्रको मृत्युपछि कट्टप्पाले भल्लालदेवको विश्वासघातको बारेमा थाहा पाए र शिवागमीलाई खबर गरे जसले उनको दरबारको बाहिर डराउने सेनालाई अमरेन्द्रको मृत्यु भएको र बच्चा महेन्द्र बाहुबलीले सिंहासनमा चढ्ने कुरा प्रकट गरे। भल्लालदेव र उनका मान्छेहरूले रानीलाई पक्रन लागेका थिए, उनी नयाँ राजासँग भागे तर भाल्लादेवले काँडले हान्दा नदीमा खसेकी छिन्। भल्लालदेव एक अत्याचारी साम्राज्य बन्छन् जसले आउँदो २ase बर्षमा देवसेनालाई कैदी बनाएर कुन्टालालाई नष्ट गर्‍यो, महेन्द्रले उनलाई बचाउन खोज्ने विद्रोहीहरूको साथ गठबन्धन गरे।
सम्पूर्ण कथा सुनेपछि महेन्द्र बाहुबली (उर्फ शिवदु / शिव) तुरुन्त युद्धको घोषणा गर्दछ। उनले विद्रोही सेना भेला गर्छन्, गाउँलेहरू र छरिएका सैनिकहरू मिलेर। कट्टप्पा र अवन्तिकाको सहयोगमा सेनाले महिष्मतीलाई घेरा हालेको छ। भल्लालदेवले फेरि देवसेना कब्जा गरे तर कट्टप्पा, महेन्द्र र विद्रोहीहरूले सहरको पर्खाल भत्काए र उनलाई बचाए। महेन्द्रले काकालाई लडाई गरे र उसलाई देवसेनाको पिँजरको साins्लोले बाँधेर तल झारे। सफा गर्ने विधि पूरा गरेपछि देवसेनाले भल्लालाई पायरमा जलाउँछिन्, उनको शासनकाल स्थायी रूपमा समाप्त गरे।
भोलिपल्ट, महेन्द्रलाई महिष्मतीको नयाँ राजा अवन्तिकाको साथ रानीको रूपमा स्थापित गरियो। उनले घोषणा गरे कि महिष्मति उनको नेतृत्वमा शान्ति र न्यायको समर्थनमा समर्पित हुनेछ।
क्रेडिटको समयमा कथा सुनेकी सानी केटीले सुझाव दिन्छ कि महेन्द्र र अवन्तिकाको बच्चा महिष्मतीको नयाँ राजा बन्ने छ। उनको कथावाचकले सुझाव दिन्छ कि यो अर्को कथा हो।
↑ "It's official! Baahubali2to hit the screens on April 28, 2017", Hindustan Times, ५ अगस्ट २०१६, मूलबाट १२ अगस्ट २०१६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १६ अगस्ट २०१६।
↑ "Baahubali 2: The Conclusion [Telugu version] (U/A)", २ अप्रैल २०१७।
↑ Naman Ramachandran (५ अक्टोबर २०१५), "Busan: Final ‘Baahubali’ Aims to Be Bigger, More Emotional", Variety, अन्तिम पहुँच २२ जुलाई २०१६।
↑ "'Bahubali 2' overseas distribution rights: 'The Conclusion' makers quote Rs 50 crore", IB Times, २२ जुलाई २०१६।
↑ "Baahubali2box office collection day 3: With Rs 540 crore worldwide collection, the age of SS Rajamouli is here", indianexpress.com।
↑ Nyayapati, Neeshita (२८ अप्रिल २०१८), "One year since the release of Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty and Tamannaah starrer 'Baahubali 2': 8 lesser known facts about the film", Times News Network, अन्तिम पहुँच २० सेप्टेम्बर २०२० – The Times of Indiaद्वारा।
इन्टरनेट चलचित्र डेटाबेसमा बाहुबली २: द कन्क्लुजन
द कन्क्लुजन बक्स अफिस मोजोमा
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=बाहुबली_२:_द_कन्क्लुजन&oldid=973108" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २० डिसेम्बर २०२०, ११:१३
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ११:१३, २० डिसेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।